१. हाइटीका राष्ट्रपति जोभेनेल मोइजको हत्या कहिले भयो ?  सन् २०२१ जुलाई ७ । – पोर्ट–एयु प्रिन्सस्थित राष्ट्रपतिनिवासमा हतियारधारी समूहले आक्रमण गरी हत्या गरेको । – सन् २०१७ को फेब्रुअरीदेखि सत्तामा आउनुभएका ५३ वर्षीय जोभेनेलले सन् २०१८ मा हुने व्यवस्थापिकाको चुनावमा ढिलाइ भएपछि राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार प्रयोग गरी हाइटीमा शासन गर्दै आउनुभएको थियो ।
गोरखापत्र अनलाइन असार २३, २०७८ बुधबार
वित्तीय सङ्घीयता १. वित्तीय सङ्घीयता भनेको के हो ? नेपालमा यससम्बन्धी के–कस्तो व्यवस्था छ ?चर्चा गर्नुहोस् ।  सङ्घीय प्रणालीका सरकारले आर्थिक अधिकारको स्वतन्त्रतापूर्वक प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्थालाई वित्तीय सङ्घीयता भनिन्छ । यसमा सङ्घीय इकाइले वित्तीय अधिकारको प्रयोग गर्ने, जिम्मेवारी लिने, उत्तरदायित्व वहन गर्ने गर्छन् । यसले सबैभन्दा नजिकको सरकार सेवा प्रवाहमा बढी कार्यकुशल हुन्छ र यसलाई साधन स्रोत, शक्ति...
१. बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत्् आयोजनाको उद्घाटन कहिले गरियो ?  विक्रम संवत् २०७८ असार २१ । – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रमनिवास बालुवाटारबाटै भर्चुअल रूपमा टर्बाइनको ‘स्वीच अन’ गरेर आयोजना उद्घाटन गरिएको । – कुल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको असार २१ मा पहिलो टर्बाइनबाट ७६ मेगावाट विद्युत्् उत्पादन थालिएको । – सो आयोजनाका ७६ मेगावाट क्षमताका ६ वटा टर्बाइन रहेका ।...
गोरखापत्र अनलाइन असार १६, २०७८ बुधबार
साइबर क्राइम र कानुनी व्यवस्था १. साइबर क्राइम भनेको के हो ? साइबर क्राइम नियन्त्रणका लागि नेपालमा के–कस्तो व्यवस्था छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।  कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्क तथा उपकरणको प्रयोग गरी गरिने गैरकानुनी कार्यलाई साइबर क्राइम भनिन्छ । यो विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट गरिने विद्युतीय अपराध हो । यो खासगरी कम्प्युटर (ल्यापटप वा डेस्कटप) र मोबाइल (स्मार्ट फोन वा ट्याब्लेट) जस्ता उपकरणमा इन्टरनेट जडान गरी प्रयोग...